Kitra Afrikanina : niara-tonga omaly ny Cnaps sy ny Wydad | NewsMada
Tafaverina an-tanindrazana omaly, tamin’ny 3 ora tolakandro, ny ekipan’ny Cnaps Sport. Niara-dalana tamin’izy ireo koa ny klioban’ny Wydad Athletic Club. Raha tsiahivina, avy niatrika ny lalao mandroso, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra ny roa tonta. Fihaonana natao tany Maraoka, ny asabotsy lasa teo.
Raha ny tati-baovao, mbola hijanona eto an-drenivohitra aloha ny Maraokanina, ary ny zoma vao hamonjy an’i Mahajanga. Noho ny tsy fisian’ny sidina ny anton’izany. Hipetraka ao amin’ny Carlton izy ireo mandritra ny fijanonany eto Antananarivo, ary eny amin’ny kianjan’Alarobia no hiatrika ny fanazarantena.
Anio ihany, efa hamonjy ny renivohitr’i Rasaraka ny Cnaps Sport, ary any no hanao ny fanomanantenany.
Marihina fa ny asabotsy 19 marsa ho avy izao, ny hanatanterahana ny lalao miverina eo amin’ny roa tonta. Nisaraka tamin’ny isa 5 noho 1 ny andaniny sy ny ankilany, nandritra ny lalao mandroso. Hanala vela ny Cnaps Sport, amin’ity, ary tsy maintsy mandresy amin’ny isa 4 noho 0 vao tafita amin’ny dingana manaraka.